By Eneresi Takawira
Zita rangu ndinonzi Eneresi Takawira.Ndine makore 34 ekuberekwa.Ndinogara muGoromonzi Ward 2 mudunhu rasabhuku Zhanda kwaChinamora.
Mumusha medu taita dambudziko remvura ine hutsanana yekushandisa.Panguva ino migodhi mizhinji yanga yawoma mvura.Nokudaro tine chibhorani icho chave kushandiswa neveruzhinji mumusha .
Zvino dambudziko nderekuti chibhorani ichi hachina utsanana hwakakwana nekuti simbi dzepo dzinoita kuti tikwanise kuchidhaya dzakafa.Saka parizvino changa chavhurwa vanhu vave kutoshandisa semugodhi.Ada zvake anongoshandisa chitini chake uye mvura inotsikwa nevanhu inongodzokera makaremo muchibhorani uye zvekare chinogara chakashama.
Vamwe vanotofamba chinhambwe chakati rebei vachiuya kuzochera mvura pachibhorani ichi.
Chikumbiro chedu vagari vemumusha umu ndechekuti dai tawanirwawo pekuchera mvura pane hutsanana kuti tisabatwe nezvirwere.kungave kugadzirwa kwaicho chibhorani chatinoshandisa kana kuchererwawo migodhi mudunhu medu zvose tinongozvitenda.
Panguva ino tave kutotya kuti zvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwehutsanana zvakaita secholera zvinogona kuzotibata kana tikaramba tichichera mvura pachibhorani ichi.
Previous Post: WATER SHORTAGES AFFECTS HEALTH IN ARMSTERDAM PARK
Next Post: Unpaid care work remains a burden to the women of our society.